गोरखा २ बाट अायाे ताजा विवरण बाबुराम भट्टराइले ह्वात्तै बढाए मतान्तर (अपडेट) - eKhojkhabar
गाेरखा । गाेरखा क्षेत्र नम्बर २ मा लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले मत अन्तर बढाउँदै लगेका छन् । भट्टराइले मतदान गरेको खोप्लाङस्थित अन्नपूर्ण मावि मतदान केन्द्र र वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले मतदान गरेको गोरखाको जौवारीस्थित परोपकार आदर्श मावि केन्द्रलगायतकाे मतगणना गर्दा डा. भट्टराई १ हजार ५ सय ९० मतान्तरले श्रेष्ठभन्दा अगाडि रहेका छन् ।
याे समाचार तयार पार्दासम्म २२ हजार ५६८ मतगणना भएको छ। भट्टराईले ११ हजार ३४९ मत ल्याएका छन् भने श्रेष्ठले ९७४९ मत ल्याएका छन्। वाम गठबन्धनको गढ मानिएको यस क्षेत्रमा श्रेष्ठलाई कम मत आएको छ।
यस्तै गोरखा २ को दुवै प्रदेशमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार अघि छन् । २ (क) मा नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले ५६०३ मत ल्याउँदा माओवादी केन्द्रकी कमला नहर्कीले ५५५६ मत ल्याएकी छन्। यहाँ ११ हजार ७९५ मत गणना भएको छ।
गोरखा २ (ख) मा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशचन्द्र दवाडी ६६५२ मतका साथ अघि छन् भने उनलाई माओवादी केन्द्रका अमर तमुले ५२२३ मत ल्याएर पछ्याएका छन्। यहाँ अहिलेसम्म १२ हजार छ सय ३१ मतगणना भएको छ।
गोरखा १ मा वाम गठबन्धन अघि
गोरखा १ मा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा क्षेत्रमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरु अघि छन्। माओवादी केन्द्रका नेता हरिराज अधिकारी ६३५८ मतका साथ अघि र कांग्रेसका उम्मेदवार चीनकाजी श्रेष्ठ ५४०६ मतका साथ पछ्याइ रहेका छन्। अहिलेसम्म १३ हजार छ सय ३९ मत गणना गरिएको छ।